ဂြိုလ်သားပုံစံ ရွှံ့ရုပ်(ဒိုဂူး)၏ သရုပ်မှန်ကိုဖော်ထုတ်ခြင်း။ ရှေးတုန်းကတည်းက လူပုံစံတုပခြင်းကို နှစ်သက်ခဲ့ကြတာလား? - JAPO Japanese News
ဂြိုလ်သားပုံစံ ရွှံ့ရုပ်(ဒိုဂူး)၏ သရုပ်မှန်ကိုဖော်ထုတ်ခြင်း။ ရှေးတုန်းကတည်းက လူပုံစံတုပခြင်းကို နှစ်သက်ခဲ့ကြတာလား?
ကြာ 12 May 2022, 11:59 မနက်
ဂျပန်ရဲ့ဟိုးရှေးအချိန်ကာလတွေကတည်းက ရှေးဟောင်းလူတွေဖန်တီးခဲ့ကြတဲ့ အရာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီထဲမှာတော့ ရွှံ့နဲ့လုပ်ထားတဲ့လူရုပ် 埴輪（はにわ）ဟနိဝ နဲ့ 土偶（どぐう） ဒိုဂူး ဟာ နာမည်ကြီးပါတယ်။
နှစ်ခုလုံးကဆင်သလိုရှိပေမဲ့ လုံးဝမတူပါဘူး။ ဒီအပြင် ဆန်းကြယ်မှုတွေများလွန်းတဲ့ ဒိုဂူး ရဲ့သရုပ်မှန်ဟာ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ အရင်ဆုံး 埴輪 ဟနိဝ နဲ့ 土偶 ဒိုဂူး ရဲ့ကွဲပြားချက်ကို ကြည့်ကြရအောင်…
ဒီလိုပုံစံလူရုပ် (သို့မဟုတ်) မြင်းကိုပုံစံတုပထားတဲ့ ကြွေမပါသောလူရုပ်ဟာ 埴輪 ဟနိဝ ဖြစ်ပါတယ်။
ထုံးတမ်းစဥ်လာပွဲတွေမှာအသုံးပြုသလို၊ ဘုရင်သေတဲ့အခါ ဘုရင့်ကိုစောင့်ရှောက်မယ့် လူတစ်ယောက်ကို အတူသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းမှကယ်ဖို့အတွက် လူကိုယ်စားအနေနဲ့လည်း အသုံးပြုပါတယ်။ ၎င်းတို့ကို ၃ ရာစုနဲ့ ၆ ရာစုဝန်းကျင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ပုံသဏ္ဍာန်ကလည်း နားလည်ရလွယ်ကူတဲ့အတွက် အသုံးပြုမှုကလည်းရိုးရှင်းပါတယ်။
၎င်းကတော့ 埴輪 ဟနိဝ ထက်ပိုရှေးကျပါတယ်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀၀ မတိုင်ခင်လောက်ကတည်းက ပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့၊ ၎င်းပုံစံကပိုပြီး ထူးဆန်ပါတယ်။ နာမည်ကြီးတာကတော့ ဒီတစ်ခုပါ။
ဂြိုလ်သားလို့သာမြင်ရတယ်လို့ပြောသူရှိပေမဲ့ ဒါဟာ အူကြောင်ကြောင်နိုင်လှပါတယ်။ လူပုံစံထုလုပ်ထားတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ လူနဲ့ကိုမတူဘူးဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ 土偶 ဒိုဂူး မှာတော့ ပုံစံတစ်မျိုးစီရှိပြီး အားလုံးကကိုယ်ပိုင်စတိုင်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ရှေးလူတွေမို့ လက်ရာမကောင်းတာပါလို့ တွေးသူရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမဲ့၊ လက်ရာမကောင်းတာမဟုတ်ဘဲ စလုပ်ကတည်းက ဦးတည်ချက်သက်သက်ရှိနေတယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ခံစားရပါတယ်။
ဒီအပြင် 土偶 ဒိုဂူး မှာ နောက်ထပ်ဆန်းကြယ်မှုတွေများစွာရှိနေပါတယ်။
မိန်းကလေးနဲ့တူတာကများတဲ့အပြင် အများစုက ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ထူးခြားမှုရှိနေတယ်။
မြေကြီးထဲမြှုပ်ထားတဲ့အချိန် တစ်ချို့နေရာတွေပျက်စီးသွားတာဖြစ်မယ်လို့ထင်ရပေမဲ့၊ ခွဲချေပြီးမှမြှုပ်နှံထားပုံအဖြစ် ရှာဖွေတွေ့ရှိထားရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အန်နီမေးရှင်းနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဂျပန်ရဲ့ မူလပုံစံတစ်ခုရှိနေပါတယ်။
ဂျပန်ရဲ့ရှေးအကျဆုံးစာအုပ်လို့ခေါ်တဲ့ 古事記（こじき）ခိုဂျိခိ ဆိုတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ရှိတယ်။ ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ ဂျပန်နိုင်ငံကို စတင်တည်ထောင်စက ဒဏ္ဍာရီများကို ဆက်တိုက်ရေးသားထားပေမဲ့၊ ဒီလိုအကြောင်းအရာတစ်ခုပါဝင်နေပါတယ်။
စပါးကိုအစိုးရတဲ့နတ်ဘုရားမ オオゲツヒメ Ogetsuhime ကိုသတ်ခြင်းဖြင့်၊ ထိုနာကျင်မှုမှ ဆန်စပါး၊ သစ်အယ်သီးနှင့် ဂျုံကဲ့သို့ သီးနှံများမွေးဖွားလာမယ် ဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကံကောင်းခြင်းအသီးအနှံများရိတ်သိမ်းခြင်းက 土偶 ဒိုဂူး ရဲ့အစပဲလို့ ပြောကြပါတော့တယ်။
များသောအားဖြင့်土偶 ဒိုဂူး ရဲ့ဝမ်းဗိုက်ကပျက်စီးနေပါတယ်။ ဒါဟာအမျိုးသမီးဝမ်းဗိုက်မှာကလေးတည်တယ်၊ တစ်နည်းအားဖြင့် အသီးသီးတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လို့ ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါဖြင့် ဒီထူးခြားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကရော? လို့ဆိုရရင် အပင်တစ်ပင်ကို အသွင်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ဘယ်အခြမ်းကအပင်ဖြစ်ပြီး၊ ညာအခြမ်းက ရွှံ့ရုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းက Onigurumi လို့ခေါ်တဲ့ သစ်ကြားသီးတစ်မျိုးရဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ သစ်အယ်သီးကိုပုံယူထားတဲ့ အရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ပိန်းဥ လို့ ပြောပါတယ်။
ဟောဒီ土偶 ဒိုဂူး တွေကိုထုလုပ်ခဲ့တာက ဂျပန်ရဲ့Jōmon period (縄文時代) ကဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၁၀၀၀၀ ခန့်ကပေါ့..
ငြိမ်းချမ်းတဲ့ယဥ်ကျေးမှု ရေရှည်တည်တံ့ခဲ့တာက သမိုင်းတစ်လျှောက် Jōmon ယဥ်ကျေးမှုသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအပြင်ဒီ 土偶 ဒိုဂူး တွေကိုစတင်ပြီး Jomon မြေအိုးတွေကို လက်တင်အမေရိကမှာလလည်းတွေ့ရပါတယ်။ မြေဆီလွှာပါဝင်မှုကို စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါ ၎င်းဟာပြည်တွင်းမှာမတွေ့ရတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဂျပန်ကနေလာတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
ရွှံ့ရုပ် 土偶 ဒိုဂူး ရဲ့ပုံစံက သေချာတာကတော့ ဂြိုလ်သားနဲ့ပဲတူတယ်နော်…
ရထားစောင့်နေတဲ့အချိန် ဒန်းစီးပြီးဖုန်းအားသွင်းနိုင်မယ့် Chiba ခရိုင်ရဲ့‌ပြောင်းလဲမှု
ဒေါက်တစ်ချောင်းတည်းရှိတဲ့ ဂျပန်ဖိနပ် Geta !!! ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အထောက်အကူပြုမလား?